Fifandraisana lavitra: fitiavana amin'ny fitsapana azo ampiharina - fomba fiainam-bilaogy ao amin'ny fianakaviana
Fifandraisan-davitra - Sary avy amin'ny Free-Photos ao amin'ny Pixabay
Amin'ny fifandraisana lavitra, matetika dia mifankahita isaky ny faran'ny herinandro hafa fotsiny ianao, indraindray aza tsy dia matetika loatra. Noho izany dia mandehandeha ianao mandritra ny herinandro tsy misy ny vadinao. Na dia ao anaty fifandraisana vaovao aza ianao dia tsy miraharaha ny finamanana amin'ny voalohany, dia hohamafisinao matetika amin'ny fifandraisana lavitra mba hanonerana ny tsy fisian'ny mpiara-miasa.
Tombony 2: Tsy misy fanelingelenana avy amin'ny mpiara-miasa
Indrindra amin'ny fotoan-tsarotra any am-pianarana, eny amin'ny oniversite na any am-piasana, matetika ny fifandraisana vaovao dia manelingelina, satria tsy dia ilaina loatra ny fanelingelenana. Amin'ny fifandraisana lavitra, etsy ankilany, ampy ny fotoana ianarana, ary tsy mila ampamoahina ianao raha efa elaela no niasa.
Tombony 3: olana vitsy isan'andro
Noho ny hafaliana mifankahita indray sy ny fotoana fohy ahafahanao mandany miaraka dia miala kely any aoriana ny quirks kely an'ny mpiara-miasa. Raha ny tokony ho izy dia maro no azo heverina ho toetra manintona, ary ny iray mahalana no mety hitebiteby noho ny kilalao toy ny fantson-nify avela avela.
Tombony 1: Tsy misy fanamarinana ny mety amin'ny fampiasana isan'andro
Na dia tsara aza ny tsy fisian'ny olana andavanandro amin'ny lafiny iray, dia misy lafiny ratsy ihany koa. Rehefa dinihina tokoa, ny mpivady dia tsy maintsy manaporofo fa mety amin'ny fampiasana andavanandro ho an'ny fifandraisana maharitra. Na dia eo amin'ny fifandraisana lavitra aza ny faran'ny herinandro dia matetika no misy ny lafiny mahafinaritra amin'ny fiaraha-miasa, ny olana isan'andro toy ny ara-bola, ny fanasana lovia na ny fandaharana amin'ny fahitalavitra dia nisedra ny fifandraisana. Raha miara-mifindra ianao amin'ny farany rehefa ela, dia tokony ho fantatrao tsara fa ho hafa noho ny teo aloha ny fotoana iarahana. Amin'ny fifandraisana tsara, fifandeferana sy fihenan'ny zavatra andrasana, tsy misy mahasakana ny fahasambarana fitiavana mitohy.
Tombony 2: Faniriana lehibe
Amin'ny fifandraisana lavitra, ny elanelana misy eo amin'ny samy mpiray tampo dia mety ho mahazaka be indraindray. Ny finday, WhatsApp, Skype, resaka video na taratasy fitiavana taloha dia tsy afaka manolo ny fifandraisana mivantana.
Tombony 3: lafo ny saran-dia
Miankina amin'ny toerana onenan'izy mirahalahy mpiara-miasa dia mety ho lafo be ny saran-dia. Tsy azo atao foana ny mivezivezy miaraka amin'ny tapakila mora dia kely, ary raha manao izany ianao dia matetika tsy mandeha amin'ny fomba haingana indrindra.
Sariitatra tia an'i Snuggly sy Yawny
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 3. March 2021 Sokajy Fiaraha-miasa & izahoKeywords fifandraisana, fifandraisana lavitra, Liebe, fiaraha-miasa
indray Lahatsoratra taloha: Fotoana ho an'ny roa - ray aman-dreny fa koa mpiara-miasa
more Lahatsoratra manaraka: Jamba lamba - tsy misy fitafiako